मन्त्री बाँस्कोटाले भने : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर कराउने तर डिजिटल क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन आएको नहेर्ने ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
मन्त्री बाँस्कोटाले भने : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर कराउने तर डिजिटल क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन आएको नहेर्ने ?
काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले डिजिटल क्षेत्रलाई वैधता दिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । क्यान इन्फोटक २०२०को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाँस्कोटाले डिजिटल क्षेत्रको पारदर्शिता, सुशासन र यसको वैधताका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । विधेक पारित नभए डिजिटल कारोबारले वैधता नपाउने समेत उहाँले बताउनुभयाे ।